သူနဲ့ညား ခဲ့ ရင် အဆင်ပြေနိုင် ၊ မပြေနိုင် တွက်ကြည့်နိုင် တဲ့ နည်း…. – Shwe Yoe
Shwe S N | August 13, 2021 | Knowledge, Local News | No Comments
ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံ ပါမပါ၊ ပြီးတော့ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်လေးတွက်ပြီး သိမြင်နိင်တဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်းလေး ဖြစ်ပါတယ် …။
ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ် အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့ …။
ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်ကြရအောင် …။
သင်က 23.4.1991 သင့် ချစ်သူက 14.7.1992 ဆိုပါစို့ …။
သင့်မွေးနေ့ + သင့်ချစ်သူမွေးနေ့ = အဖြေ
အဖြေက 8 ဖြစ်တယ်ပေါ့ …။
ရှင်းပြီနော်။ ကဲ…တွက်ကြည့်ကြမယ် …။
(၁) ရတဲ့သူကတော့ သင်ဟာ သူ့ကိုအသက်ပေးနိုင်လောက်အောင်ချစ်ပေမယ့် သူ့အတွက်ကတော့ ရည်းစားဟောင်းက ပစ်သွားလို့ အသဲကွဲပြီးခဏလာနားတဲ့ Bus ကားမှတ်တိုင်လိုဖြစ်နေတာပါ …။
သင်နဲ့ အတူနေတဲ့အချိန်မှာ သူဟာပျော်ရွှင်နေပေမယ့် အဲဒီပျော်ရွှင်ခြင်းက ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပွေရှုပ်တတ်တဲ့ သူ့အကျင့်က သင့်ထက်သာမယ့်သူကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေလို့ပဲဖြစ်တယ် …။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းဟာ မျောက်တစ်ကောင် သစ်ပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျတာနဲ့ အတူတူလိုဖြစ်နေတာပါ …။
နောင် Bus ကားအသစ်ဟာ သူ့ဆီဆိုက်ကပ်လာခဲ့ရင် သူတစ်ခါ တည်းပြေးတက်သွားဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်သလို သင့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့မှာလဲဆိုပြီး ခေါင်းပြန်စောင်းငဲ့ဖို့တောင် အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော် …။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သင်နဲ့သူဟာ ချစ်တော့ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မုန်းတီးမှုနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အတူတူနေခဲ့ရင်လည်း လက်ဝှေ့ပွဲကိုကြည့်နေရသလို နေ့စဉ်ထသတ်မှာတော့ အမှန်ပါပဲ …။
အကျင့်တွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ တစ်ယောက်ပြင်းလာရင် ကျန်တဲ့တစ်ယောက် ကလည်း အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင်မှ သင်တို့မှာ သုံးပွင့်ဆိုင်မရှိသေးဘူးနော် …။
တစ်နေ့ကျရင် သူကခဏဝေးဝေးလောက် နေကြည့်ကြရအောင် လို့ပြောလာခဲ့ရင် သင်သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ သူက သင့်ကိုမချစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်နိုင်တဲ့ အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ ထားပေးလိုက်ပေါ့နော် …။
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောက်ဆုံးတော့လည်း သင်က အစစ်အမှန်ကို တွေ့တာပဲလေ။ သင်တို့နှစ်ယောက် ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ရေစက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တူညီနေတာပဲ …။
အကျင့်၊ အကြိုက်၊ ညစ်ပတ်ခြင်း၊ ပေါခြင်း၊ အရူးထခြင်းတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ကြည့်နေရသလိုပဲ …။
သင်တို့အချစ်ဟာ ဘာအရသာမှမရှိပေမယ့် ခိုင်မြဲမှုရှိတာတော့ အမှန်ပဲလေ …။
ကြည့်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထိ မြင်ရတယ်ဆိုတာပေါ့။ အဲ..တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ သင်သတိထားရမှာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပဲ၊ သင့်အတွက် သူဟာ ငြီးငွေ့စရာကောင်းနေတယ် …။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အချစ်တွေကို ရှာဖွေနေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်လူမှ သင့်ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရွှတ်ရွှတ်လူထက် ပိုပြီးကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်သိလိမ့်မယ်။ မသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီအချိန် ရောက်ခဲ့ရင် နှောင်းချင်လည်းနှောင်း သွားမှာပေါ့ …။
(၄) ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ စေးကပ်ကပ်ကြီးလို ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုခွာခွာ ခွာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမှန်းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနေတယ်။ သင်ကလည်း အိနြေ္ဒရှင်ပီသစွာနဲ့ သူ့ကိုချစ်တယ် လို့ ဖွင့်ပြောဖို့ မရဲဘူးဖြစ်နေတတ်တယ် …။
ဒါကြောင့် ဟိုဖက်ကိုလည်းမသွား၊ ဒီဖက်ကိုလည်း မရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ခေါင်းချင်း ဆိုင်ပြီး ပြဿနာကိုတူတူဖြေရှင်းကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ …။
မဟုတ်ရင်တော့ သင်တို့ထဲက တစ်ယောက် မဟုတ်တစ်ယောက်ဟာ အသစ်တွေ့ပြီး သင်တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက ဇာတ်သိမ်းသွားနိုင်ပါတယ် …။
(၅) ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်က သွေးရဲရဲသံရဲရဲ အချစ်ပေါ့။ ဘာဂိုဏ်းညာဂိုဏ်းတွေ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေ လိုက်ရင်းအသက်လုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ်စစ် …။
သင်တို့အချစ်လမ်းကြောင်းမှာဘယ်လောက်ပဲ အန္တရာယ်ရှိပေမယ့် သင်တို့ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကို နားလည်ပြီး နှလုံးသားအစစ်နဲ့ အမှန်ချစ်တာ ဖြစ်ပါတယ် …။
သင်တို့နှစ်ယောက်က ခုချိန်မှာချစ်သူအဆင့်တွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ နှစ်လွှာပေါင်းမှ တစ်ရွက်ဆိုပြီး ဖြစ်နေကြပါပြီ။ အသက်ပေးပြီးချစ်ကြတဲ့ သူတွေအဆင့် ရောက်နေကြပါပြီ …။
သင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်မဟုတ်ဘူးလို့ မယုံသင်္ကာမဖြစ်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကြည်နေပါပြီ။ သင်ဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှင်အစစ်ဆိုပြီတော့ …။
(၆) ရတဲ့သူက ခုချိန်တွေမှာ ဘာစားစားသကြားထည့်ဖုိ့တောင် မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တို့အ ချစ်ရဲ့ချိုမြိန်ခြင်းက သကြားရဲ့အချိုဓာတ်ကိုတောင် ဝါးမြိုသွားလို့ဖြစ်ပါတယ် …။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပျောရွှင်မှုဟာ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ သင်ခံစားရမယ်။ ရေမြောင်းပုပ်မှာ လရိပ်ကို မြင်ရသလိုပေါ့။ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူနဲ့ ဒီလိုအမှတ်တရအချိန်လေးတွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသေချာသေးဘူး …။
သို့ပေမယ့်လည်း သင်ဟာ ခုချိန်မှာအရမ်းပျော်နေတယ်လို့တော့ ပြောနိုင်တယ်လေ။ အကယ်လို့ သူ့ပြဿနာ တစ်ခုခုရှိပြီး သင့်ကိုမသိစေချင်ရင်လည်း သင်က ဘာမှမသိသလိုနေမှာ အသေအချာပဲ ….။
သင်ဟာသူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ပြီလားလို့ မေးရရင်တော့ သင့်ရဲ့အစွမ်းအစပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ခိုင်မာမှု နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လေ။ သူ့ရဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့လားဆိုတာ …၊
(၇) ရတဲ့သူက ဒီတစ်ယောက်ကသင့်ကိုအမြင်ရှင်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အနိမ့်စား လူ တစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှု၊ အများကြီး အများကြီးပေါ့ …။
သင့်ကိုတစ်ခုခုကူညီလိုက်ရင် ကျေးဇူး အတင်ခံချင်တာက အရင်ပေါ့။ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့၊ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့ဆိုတာ သူ့ပါးစပ်ကပြောလာတဲ့ စကားတွေပေါ့။ ပွေလည်းပွေတယ်။ ကပ်စေးလည်းနဲတယ်။
ဆိုးသောအရသာမျိုးစုံနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူပေါ့။ သင်နဲ့ရည်းစား လာဖြစ်တာကလည်း အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး။ super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ သင်ဟာ ရုပ်မရှိရင်အဲဒီတစ်ယောက်က သင့်ကိုမျက်စောင်းလေးတောင် ထိုးကြည့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး …။
ပြီးတော့ သင်မသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတွဲပေါင်းများစွာကိုလည်း ဂိုဒေါင်ကြီးထဲထည့်ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ခွင့်ကတော့ လုံးဝမမျှော်လင့်နေပါ နဲ့တော့နော် …။
(၈) ရတဲ့သူက သူ့ရဲကနောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာ ၅ဝ% = ၅ဝ% ပါပဲ။ သင်တို့အချစ်ဟာ ကြာပြီး အားလုံးနေရာကျနေပြီလေ။ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်သိနေပြီလေ …။
ဒါကြောင့် အတူနေတဲ့အချိန်ဆို စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ အဲဒီစိတ်ချမ်းသာတာကချိုတာတွေ romatic တာတွေ မရှိတဲ့ ခံစားချက်၊ သဝန်တိုခြင်း၊ လိုချင်တပ်မက်မှုမရှိတဲ့ အချစ်ဖြစ်နေတယ် …။
ဒါကြောင့် သင်တို့အချစ်က သကြားပြတ်သွားတဲ့ အချစ်နဲ့တူတယ်လေ။ သင်တို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်သိကြမှာပါ …။
တဈယောကျအပျေါတဈယောကျဘယျလောကျ နားလညျနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာ သူ့အပွငျသငျ့အပျေါမှာေ နာကျထပျနားလညျနိုငျမယျ့ သူလညျး ရှာလို့တှေ့တော့မှာ မဟုတျတော့ဘူးလေ …။
(၉) ရတဲ့သူက အားရိုးရိုး…သင်တို့အချစ်ကိုနှိုင်းရရင်တော့ နံနက်နေထွက်ချိန်နဲ့ ညနေနေဝင်ချိန်၊ ကောင်း ကင်နဲ့မြေကြီး၊ သူချမ်းသာနဲ့သူဆင်းရဲ့၊ နတ်ပန်းနဲ့ ငရဲပန်း စတာတွေပေါ့ …။
ဒါကြောင့် သင်တို့အချစ်ကို သင်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်နားမလည်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် ဘာထူးဆန်းစရာတွေ ထပ်လာဦးမလဲဆိုပြီးတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်အကြောင်းဟာ ဟာသတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်နေတယ် …။
သင်တို့နှစ်ဦးကလည်း သိနေတယ်လေ။ ကြာရှည်လက်တွဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့။ ခဏတစ်ဖြုတ်လေးလက်တွဲ တာကလည်း ကိုယ့်ဘဝမှာရယ်စရာအမှတ်တရအဖြစ်ထားခဲ့ချင်လို့ပဲ ဖြစ်တယ် …။
သင်တို့နှစ်ဦးဟာ အလွန်ခြားနားလွန်းလို့ တူတူသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့။ သင်တို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားခဲ့ရင်လည်း သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ဆက်ဖြစ်နေအုံးမှာပါနော် …။
ကိုယျနဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံ ပါမပါ၊ ပွီးတော့ ဘယျလိုခဈြခွငျးမြိုးနဲ့ လကျတှဲသှားကွမယျဆိုတာကို လှယျလှယျလေးတှကျပွီး သိမွငျနိငျတဲ့ ဗဒေငျတှကျနညျးလေး ဖွဈပါတယျ …။
ခဈြသူမှေးနသေ့က်ကရာဇျ အားလုံးပေါငျးကွညျ့ ၊ နောကျဆုံး ရလာတဲ့ကိနျးတဈလုံးက အဖွပေေါ့ …။
ဥပမာ တဈခုအနနေဲ့ ကွညျ့ကွရအောငျ …။
သငျက 23.4.1991 သငျ့ ခဈြသူက 14.7.1992 ဆိုပါစို့ …။
အဖွကေ 8 ဖွဈတယျပေါ့ …။
ရှငျးပွီနျော။ ကဲ…တှကျကွညျ့ကွမယျ …။
(၁) ရတဲ့သူကတော့ သငျဟာ သူ့ကိုအသကျပေးနိုငျလောကျအောငျခဈြပမေယျ့ သူ့အတှကျကတော့ ရညျးစားဟောငျးက ပဈသှားလို့ အသဲကှဲပွီးခဏလာနားတဲ့ Bus ကားမှတျတိုငျလိုဖွဈနတောပါ …။
သငျနဲ့ အတူနတေဲ့အခြိနျမှာ သူဟာပြျောရှငျနပေမေယျ့ အဲဒီပြျောရှငျခွငျးက ဟိုမရောကျဒီမရောကျနဲ့ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ပှရှေုပျတတျတဲ့ သူ့အကငျြ့က သငျ့ထကျသာမယျ့သူကို အမွဲတမျးရှာဖှနေလေို့ပဲဖွဈတယျ …။
ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးအခဈြဖွဈဖို့ အခှငျ့အလမျးဟာ မြောကျတဈကောငျ သဈပငျပျေါက ပွုတျကတြာနဲ့ အတူတူလိုဖွဈနတောပါ …။
နောငျ Bus ကားအသဈဟာ သူ့ဆီဆိုကျကပျလာခဲ့ရငျ သူတဈခါ တညျးပွေးတကျသှားဖို့ ဝနျလေးမှာမဟုတျသလို သငျ့ကိုဘယျလိုဖွဈပွီး ကနျြခဲ့မှာလဲဆိုပွီး ခေါငျးပွနျစောငျးငဲ့ဖို့တောငျ အခြိနျရှိမှာမဟုတျဘူးနျော …။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သငျနဲ့သူဟာ ခဈြတော့ခဈြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မုနျးတီးမှုနဲ့ပေါကျဖှားလာတဲ့ ခဈြခွငျးဖွဈတယျ။ အတူတူနခေဲ့ရငျလညျး လကျဝှပှေဲ့ကိုကွညျ့နရေသလို နစေ့ဉျထသတျမှာတော့ အမှနျပါပဲ …။
အကငျြ့တှကေလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွပါဘူး။ တဈယောကျပွငျးလာရငျ ကနျြတဲ့တဈယောကျ ကလညျး အလြှော့ပေးမှာမဟုတျဘူး။ ဒါတောငျမှ သငျတို့မှာ သုံးပှငျ့ဆိုငျမရှိသေးဘူးနျော …။
တဈနကေ့ရြငျ သူကခဏဝေးဝေးလောကျ နကွေညျ့ကွရအောငျ လို့ပွောလာခဲ့ရငျ သငျသူ့ကိုနားလညျပေးလိုကျပါ။ သူက သငျ့ကိုမခဈြတာ မဟုတျပါဘူး။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျနိုငျတဲ့ အခြိနျတဈခုလောကျတော့ ထားပေးလိုကျပေါ့နျော …။
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောကျဆုံးတော့လညျး သငျက အစဈအမှနျကို တှတေ့ာပဲလေ။ သငျတို့နှဈယောကျ ရဲ့တှဆေုံ့ခွငျးဟာ ရစေကျလို့ချေါလို့ရတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ တူညီနတောပဲ …။
အကငျြ့၊ အကွိုကျ၊ ညဈပတျခွငျး၊ ပေါခွငျး၊ အရူးထခွငျးတှပေေါ့။ ဒါကွောငျ့ သူ့ကိုတှတေဲ့အခြိနျဆို ကိုယျ့ကိုယျကို မှနျကွညျ့နရေသလိုပဲ …။
သငျတို့အခဈြဟာ ဘာအရသာမှမရှိပမေယျ့ ခိုငျမွဲမှုရှိတာတော့ အမှနျပဲလေ …။
ကွညျ့လိုကျတာနဲ့နှလုံးသားထိ မွငျရတယျဆိုတာပေါ့။ အဲ..တဈခုတော့ရှိတယျ။ သငျသတိထားရမှာက ကိုယျ့စိတျကိုယျပဲ၊ သငျ့အတှကျ သူဟာ ငွီးငှစေ့ရာကောငျးနတေယျ …။
ဒါကွောငျ့သငျဟာ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့အခဈြတှကေို ရှာဖှနေတေယျ။ နောကျဆုံးတော့လညျး ဘယျလူမှ သငျ့ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရှတျရှတျလူထကျ ပိုပွီးကောငျးမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာ သငျသိလိမျ့မယျ။ မသိနိုငျဘူးလေ။ အဲဒီအခြိနျ ရောကျခဲ့ရငျ နှောငျးခငျြလညျးနှောငျး သှားမှာပေါ့ …။
(၄) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြဟာ စေးကပျကပျကွီးလို ဖွဈနတေယျ။ ဘယျလိုခှာခှာ ခှာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယျလိုဖွတျသနျးရမှနျးမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနတေယျ။ သငျကလညျး အိန်ဒွရှေငျပီသစှာနဲ့ သူ့ကိုခဈြတယျ လို့ ဖှငျ့ပွောဖို့ မရဲဘူးဖွဈနတေတျတယျ …။
ဒါကွောငျ့ ဟိုဖကျကိုလညျးမသှား၊ ဒီဖကျကိုလညျး မရောကျဖွဈနတောပေါ့။ အကောငျးဆုံးကတော့ သငျတို့နှဈယောကျခေါငျးခငျြး ဆိုငျပွီး ပွဿနာကိုတူတူဖွရှေငျးကွတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ …။
မဟုတျရငျတော့ သငျတို့ထဲက တဈယောကျ မဟုတျတဈယောကျဟာ အသဈတှပွေီ့း သငျတို့ရဲ့ ဇာတျလမျးလေးက ဇာတျသိမျးသှားနိုငျပါတယျ …။
(၅) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြက သှေးရဲရဲသံရဲရဲ အခဈြပေါ့။ ဘာဂိုဏျးညာဂိုဏျးတှေ မာဖီးယားဂိုဏျးတှေ လိုကျရငျးအသကျလုပွီး ဖွဈပျေါလာတဲ့ အခဈြစဈ …။
သငျတို့အခဈြလမျးကွောငျးမှာဘယျလောကျပဲ အန်တရာယျရှိပမေယျ့ သငျတို့ကတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကို နားလညျပွီး နှလုံးသားအစဈနဲ့ အမှနျခဈြတာ ဖွဈပါတယျ …။
သငျတို့နှဈယောကျက ခုခြိနျမှာခဈြသူအဆငျ့တှေ မဟုတျတော့ပါဘူး။ နှဈလှာပေါငျးမှ တဈရှကျဆိုပွီး ဖွဈနကွေပါပွီ။ အသကျပေးပွီးခဈြကွတဲ့ သူတှအေဆငျ့ ရောကျနကွေပါပွီ …။
သငျဟာသူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြမဟုတျဘူးလို့ မယုံသင်ျကာမဖွဈပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကွညျနပေါပွီ။ သငျဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှငျအစဈဆိုပွီတော့ …။
(၆) ရတဲ့သူက ခုခြိနျတှမှော ဘာစားစားသကွားထညျ့ဖုိ့တောငျ မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျတို့အ ခဈြရဲ့ခြိုမွိနျခွငျးက သကွားရဲ့အခြိုဓာတျကိုတောငျ ဝါးမွိုသှားလို့ဖွဈပါတယျ …။
ဒါပမေယျ့လညျး ဒီပြောရှငျမှုဟာ မပွညျ့စုံသေးဘူးလို့ သငျခံစားရမယျ။ ရမွေောငျးပုပျမှာ လရိပျကို မွငျရသလိုပေါ့။ သငျဟာ သငျ့ခဈြသူနဲ့ ဒီလိုအမှတျတရအခြိနျလေးတှကေို ဘယျလောကျကွာကွာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသခြောသေးဘူး …။
သို့ပမေယျ့လညျး သငျဟာ ခုခြိနျမှာအရမျးပြျောနတေယျလို့တော့ ပွောနိုငျတယျလေ။ အကယျလို့ သူ့ပွဿနာ တဈခုခုရှိပွီး သငျ့ကိုမသိစခေငျြရငျလညျး သငျက ဘာမှမသိသလိုနမှော အသအေခြာပဲ ….။
သငျဟာသူ့ရဲ့ နောကျဆုံးအခဈြဖွဈပွီလားလို့ မေးရရငျတော့ သငျ့ရဲ့အစှမျးအစပျေါမှာပဲ မူတညျပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ခိုငျမာမှု နဲ့လညျးဆိုငျတယျလေ။ သူ့ရဲ့ပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျရဲ့လားဆိုတာ …၊
(၇) ရတဲ့သူက ဒီတဈယောကျကသငျ့ကိုအမွငျရှငျးသှားအောငျလုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ။ အနိမျ့စား လူ တဈယောကျကဘယျလိုလဲဆိုတာပေါ့၊ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တဈကိုယျကောငျး ဆနျစိတျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို အထငျကွီးမှု၊ အမြားကွီး အမြားကွီးပေါ့ …။
ဆိုးသောအရသာမြိုးစုံနဲ့ ပွညျ့စုံနတေဲ့သူပေါ့။ သငျနဲ့ရညျးစား လာဖွဈတာကလညျး အထှအေထူးမဟုတျပါဘူး။ super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏျထူးကွီးကွောငျ့ပဲဖွဈတယျ။ သငျဟာ ရုပျမရှိရငျအဲဒီတဈယောကျက သငျ့ကိုမကျြစောငျးလေးတောငျ ထိုးကွညျ့မှာ မဟုတျပါဘူး …။
ပွီးတော့ သငျမသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတှဲပေါငျးမြားစှာကိုလညျး ဂိုဒေါငျကွီးထဲထညျ့ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြဖွဈခှငျ့ကတော့ လုံးဝမမြှျောလငျ့နပေါ နဲ့တော့နျော …။
(၈) ရတဲ့သူက သူ့ရဲကနောကျဆုံးအခဈြဖွဈဖို့အခှငျ့အရေးဟာ ၅ဝ% = ၅ဝ% ပါပဲ။ သငျတို့အခဈြဟာ ကွာပွီး အားလုံးနရောကနြပွေီလေ။ တဈယောကျအကွောငျးကို တဈယောကျသိနပွေီလေ …။
ဒါကွောငျ့ အတူနတေဲ့အခြိနျဆို စိတျခမျြးသာရတယျ။ အဲဒီစိတျခမျြးသာတာကခြိုတာတှေ romatic တာတှေ မရှိတဲ့ ခံစားခကျြ၊ သဝနျတိုခွငျး၊ လိုခငျြတပျမကျမှုမရှိတဲ့ အခဈြဖွဈနတေယျ …။
ဒါကွောငျ့ သငျတို့အခဈြက သကွားပွတျသှားတဲ့ အခဈြနဲ့တူတယျလေ။ သငျတို့နှဈယောကျက တဈယောကျကို တဈယောကျသိကွမှာပါ …။
တဈယောကအြပေါတြဈယောကဘြယလြောကြ နားလညနြိုငစြှမြးရှိတယဆြိုတာ သူ့အပှငသြင့အြပေါမြှာေ နာကထြပနြားလညနြိုငမြယြ့ သူလညြး ရှာလို့တှတေ့ော့မှာ မဟုတတြော့ဘူးလေ …။
(၉) ရတဲ့သူက အားရိုးရိုး…သငျတို့အခဈြကိုနှိုငျးရရငျတော့ နံနကျနထှေကျခြိနျနဲ့ ညနနေဝေငျခြိနျ၊ ကောငျး ကငျနဲ့မွကွေီး၊ သူခမျြးသာနဲ့သူဆငျးရဲ့၊ နတျပနျးနဲ့ ငရဲပနျး စတာတှပေေါ့ …။
ဒါကွောငျ့ သငျတို့အခဈြကို သငျတို့ကိုယျတိုငျတောငျနားမလညျနိုငျပဲ ဖွဈနရေလိမျ့မယျ။ နောကျထပျ ဘာထူးဆနျးစရာတှေ ထပျလာဦးမလဲဆိုပွီးတော့ သငျတို့နှဈယောကျရဲ့အခဈြအကွောငျးဟာ ဟာသတဈပုဒျလို ဖွဈနတေယျ …။
သငျတို့နှဈဦးကလညျး သိနတေယျလေ။ ကွာရှညျလကျတှဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့။ ခဏတဈဖွုတျလေးလကျတှဲ တာကလညျး ကိုယျ့ဘဝမှာရယျစရာအမှတျတရအဖွဈထားခဲ့ခငျြလို့ပဲ ဖွဈတယျ …။
သငျတို့နှဈဦးဟာ အလှနျခွားနားလှနျးလို့ တူတူသှားလို့မရဘူးဆိုပွီးတော့ပေါ့။ သငျတို့နှဈဦးလမျးခှဲသှားခဲ့ရငျလညျး သူငယျခငျြးကောငျးတှေ ဆကျဖွဈနအေုံးမှာပါနျော …။
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှ လုပ်ကြံခြင်းကိုခံခဲ့ရ တဲ့ ငွေကြေးပြည့်စုံပီး ရုပ်အရမ်းချောတဲ့ မဇာခြည်လှိုင်ရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်
မိုးလေဝသပညာရှင် ဆရာမလေး မစုစုစံရဲ့ ​နောက် ၄၈နာရီအတွင်း ထူးကဲမိုးတွေ ရွာမယ့်ဒေသများ
စစ်ကောင်စီအကောင်းမြင်ဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားများ အတွက် သရုပ်ဆောင်တွေ ရ ဖို့ အလွန်ခက်ခဲနေ သည် ဟု ဆို